Yin Nyein Pwint
(သား) သုခရဲ့ အားဆေးတစ်ခွက်
၁၄.၇.၂၀၁၁ (ကြာသပတေး)နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရုံးချုပ်ရှိရာ မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်သို့ ကျေးဇူးရှင် စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ ဘဘဦးသုခ၏ သားဖြစ်သူ သုခ(သား) (ခ) ကိုရဲအောင် တို့မိသားစုအား ဘဘဦးသုခ၏ တပည့်ရင်းဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ ဦးနှင်းမိုးမှ လိုက်လံပို့ဆောင် ခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/07/blog-post_15.html
လှိုင်မဟာစည် ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုက်သည် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆဋ္ဌသံဂီတိပုစ္ဆက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အရိယမဂ္ဂလမ်းညွှန်၊ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြု မဟာစည်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ နည်းနာနိဿယအတိုင်းကျင့်သုံးကြတဲ့ ကျောင်းများအနက်မှ တစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ ယောဂီကျောင်းလမ်း လှိုင်တက္ကသိုလ်အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၄င်းအပြင် လှိုင် မဟာစည် ၀ိပဿနာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အရှင်စန္ဒ၀ရက အနေဖြင့် မြန်မာပြည်အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ မဟာသတိပဋ္ဌာန် ၀ိပဿနာတရားပြန့်ပွားစေရန်အတွက် ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယများစေလွှတ်၍ တရားစခန်းများဖွင့်လှစ် သင်ကြားသာသနာပြုခဲ့ပါသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/07/blog-post_14.html
နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ နာယကချုပ်ဆရာတော်၊ ဇိနမာရ်အောင်စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ သြ၀ါဒါစရိယ၊ (၁၀၈)တောင်စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ သြ၀ါဒါစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ မဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ သက်တော်ရှည် အောင်စကြာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာကြီး၏ ဦးစီးပဓာန မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိမလဗုဒ္ဓိ သက်တော် (၈၅) နှစ်၊ ၀ါတော် (၆၅)၀ါသည် ၅.၇.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပြီး ယနေ့ ၁၁.၇.၂၀၁၁ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသားများသည် သာကေတမြို့နယ်၊ အောင်စကြာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကျောင်းမှ ရေဝေးသုဿန် ခန်းမဆောင်သို့ပင့်ဆောင်၍ နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနအခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/07/blog-post_2095.html
၇.၇.၂၀၁၁ (ကြာသပတေး) နေ့တွင် ဒေါက်တာ စုစုရီသည် မွေးမိခင် ဖခင် ဦးခင်ဝင်း + ဒေါ်ရီရီ (မိသားစု) တော်ဝင်အိမ်ရာ ၄၁ ရပ်ကွက်၊ မ/ဒဂုံမြို့နယ်တို့အား အမှူးထား၍ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များကို ကိုယ်ကျိုးမဖက်လုပ်ဆောင်နေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လှူဒါန်းလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒအရ မိမိ၏ ၀င်ငွေများထဲမှ လှူဒါန်းရန်အတွက် သီးခြားဖယ်ထားသော ငွေကျပ် ၂၀၀၀၀၀/-(နှစ်သိန်း) နှင့်ညီမျှသော ထမင်း ကြက်သားဟင်း၊ ၀က်သားဟင်း၊ အချဉ်ရည်ဟင်း၊ တို့စရာများတို့ဖြင့် စုံလင်စွာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခအဟာရ စားသောက်ဆိုင်တွင် အသင်းသူ/သားများ၊ ၀န်ထမ်းများနှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ရန်ကုန်)သို့ ဆေးဝါးလာရောက်ကုသကြသော လူနာများ၊ လူနာရှင်များ စုစုပေါင်း (၂၀၀) ကျော်တို့ကို နေ့လည်စာ အဟာရဒါနအဖြစ် ဒေါက်တာ စုစုရီနှင့် တပည့်များကလာရောက်ကာ ကုသိုလ်ဖြစ် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့သည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/07/blog-post_08.html
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မဟာရာမသီလရှင်ကျောင်းတွင် သမိန်ဒွတ်ရွာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဆရာတော်ကြီး ဦးလာဘသာမိ သက်တော် (၉၄)နှစ် နှင့် သထုံမြို့နေ ဦးယုကောင်း အသက် (၉၁) နှစ် (အမြင်အာရုံမကောင်းမွန်) နှစ်ဦးတို့ ဆုံတွေ့စဉ်နှစ်ဦးစလုံး၏ စိတ်ဆန္ဒတွင် အလှူဒါနတစ်ခု ပြုလုပ်လိုကြောင်း
ယင်းအလှူသည် အများအကျိုးကို သယ်ပိုးနေသော သူတို့ထံတွင် လှူဒါန်းလိုကြောင်း ပြောဆိုကြရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လှူဒါန်းမှုပြုရန် နှစ်ဦးစလုံး အဖြေတစ်ခု ရရှိသွားသည်။
သတင်း မူရင်း - http://myochitmyanmar.blogspot.com/2011/07/blog-post_9420.html
FFSS in 2010 Thingyan
When everyone in Myanmar are enjoying Myanmar's most famous onceayear water festival known as " Thingyan ", formal actor Kyaw Thu and F.F.S.S (Free Funeral Services) members are still striving to maintain their duties as public workers.
U Jolly Swe's Funeral
Campbell met Suu Kyi
Myanmar's detained opposition leader Aung San Suu Kyi exits the Inya Lake Hotel after meeting with U.S. Assistant Secretary of State Kurt Campbell in Yangon, Myanmar, Wednesday, Nov. 4, 2009.
Campbell met Suu Kyi on Wednesday inavisit that marked the highest-ranking talks between an American and Myanmar's detained opposition leader in 14 years.
One Chinese company is manufacturing fake seaweed made with soft plastic material.
Chit San Maung In LA (Sep 5th, 2009)
New Thu Kaa Hospital
Underground Than Shwe
အဘယသုခ ဆုတောင်းပြည့် ထိပ်ကျင်းတောင်စေတီတော်
Hlae Dan Explosion